Xog kasta oo aad uga baahan tahay xagga isku aadka rubuc-dhamaadka CL | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Xog kasta oo aad uga baahan tahay xagga isku aadka rubuc-dhamaadka CL
Xog kasta oo aad uga baahan tahay xagga isku aadka rubuc-dhamaadka CL
(Nyon) 14 Maarso 2019 – Waxaa berri oo Jimce la sameeynayaa isku aadka rubuc-dhamaadka UEFA Champions League, oo ay sanadkan muddo kaddib ay wada taagan yihiin 4 kooxood oo wada EPL ah, iyado 4 kale oo kala metelaya Spain, Italy, Holland iyo Portugal.
Waa kuwee kooxaha berri loo quri tuurayo?
Sidee u shaqeeyaa hab-raaca isku aadku?
Ma jirto dheriyayn ama dal lakala ilaalinayo, waloow wixii cusub lagu dhawaaqi doono in yar kahor isku aad samaynta, tusaale ahaan waxaa isku dhici kara kooxaha EPL, sidoo kale waxaa dhacda inay kala weecdaan.
Waxaa sidoo kale jiri doona isku aadyo u gaar ah nus-dhamaadka oo dhacaya markii lagu kala boxo wareeggan siddeed-dhamaadka.
Goorma ayaa ciyaaraha wareeggan la dheeli doonaa?
9/10 Abriil: Rubuc-dhamaadka, lugta hore
16/17 Abriil: Rubuc-dhamaadka, lugta labaad
30 Abriil/1 Maajo: Nus-dhamaadka, lugta hore
7/8 Maajo: Nus-dhamaadka, lugta labaad
Sabti 1 Juun: Final – Estadio Metropolitano, Madrid
Ciyaarahan harsan oo idil ayaa la wada dheeli doonaa saacadda 21:00CET. Wixii lagu kordhinayo waxaa go’aaminaysa UEFA.
Previous articleQadar oo keentay hindise ah inay dalal kale la marti geliyaan Koobka Adduunka 2022 (Kulan berri dhacaya)
Next article“Ha quusin, ha quusin!” – Cilladaha MAX 8 oo la sheegay inay duuliyeyaal badani horay uga cawdeen